युगसम्बाद साप्ताहिक - शनिबार कसले के भने खुलामञ्चमा ?
Tuesday, 04.07.2020, 03:06pm (GMT+5.5) Home Contact
शनिबार कसले के भने खुलामञ्चमा ?
Wednesday, 03.04.2015, 12:07pm (GMT+5.5)
एमाले चाहिएन- दाहाल
आमसभालाई सम्बोधन गर्दै ३० दलीय मोर्चाका संयोजक तथा एकीकृत नेकपा माओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले हजारौँ शहीदको बलिदानबाट प्राप्त जनआन्दोलनका उपलब्धि, अन्तरिम संविधान, विस्तृत शान्ति सम्झौता, बाह्रबुँदे समझदारी, मधेस आन्दोलन लगायत आन्दोलनका क्रममा भएका सहमति कार्यान्वयन गर्दै संविधान निर्माणमा आफूहरू इमान्दारीपूर्वक लागेको बताउनुभयो ।
उहाँले विगतका सन्धि, सम्झौता, सहमति तोडेर एकता र मेलमिलाप हुन नसक्ने, जनताका भावनाअनुरुप पहाडी, मधेसी, आदिवासी, जनजाति, मुस्लिम, उत्पीडितका पक्षमा संविधान बनाउनुको विकल्प नरहेको भन्दै वार्तामार्फत सहमतिको प्रक्रिया सुरु नगरिए सत्तारुढ दलले गम्भीर परिणाम भोग्नुपर्ने चेतावनी दिनुभयो । उहाँले भन्नुभयो “समय छँदै बहुमतीय प्रक्रिया रोकेर संवाद समितिमार्फत सहमति खोज्ने प्रक्रिया अघि बढाउनुस्, अन्यथा त्यसबाट उत्पन्न हुने परिणाम भोग्न तयार भएर बस्नुहोस् ।” विगतका सहमति र सम्झौता तोडेर सत्तारुढ दल अघि बढेकाले समस्या उत्पन्न भएको उल्लेख गर्दै यसपटक मर्न तयार रहेको तर विगतमा जस्तो झुक्न तयार नरहेको समेत उद्घोष गर्नुभयो । पहिचान भनेको जातीय राज्य नभनेको स्पष्ट पार्दै दाहालले पहिचानलाई गलत ढंगले व्याख्या गरिएको पनि बताउनुभयो ।
सहमतिका लागि कांग्रेस लचिलो भए पनि एमाले सहमतिको बाधक बनेको आरोप लगाउँदै आउनुभएका दाहालले एमाले अब नचाहिने भन्दै कांग्रेसमा घुस्न सल्लाह दिनुभयो । “हिजो चुनावमा भोट माग्दा बहुपहिचान हुन्छ भनेको थियो । अहिले पहिचान नै सुन्न नचाहेपछि एमाले किन चाहियो ? ठग्ने र भ्रष्टाचार गर्ने हो भने कांग्रेसमा बसेर पनि गर्न पाइने” सुझाव दिनुभएका दाहालले एमालेले पार्टी घोषणापत्र विपरीत कांग्रेस एजेन्डामा समाहित भएकाले अब उक्त पार्टीको आवश्यकता नभएको बताउनुभयो ।
सच्चिएर आउ- गच्छदार
मधेसी जनअधिकार फोरम लोकतान्त्रिकका अध्यक्ष विजयकुमार गच्छदारले कांग्रेस–एमालेले बाटो बिराएको भन्दै सच्चिएर बार्तामा आउन आग्रह गर्नुभयो । सम्बोधनका क्रममा अध्यक्ष गच्छदारले “आज राजधानीमा लाखौ लाख मोर्चाका साथीहरू मोर्चाको आव्हानमा आउँदा टुँडीखेलमा अटेका छैनन् । यो उपस्थितिले जनाइरहेको छ कि, हामी परिवर्तनकारी संविधान, संघीयता, धर्मनिरपेक्षता संस्थागत गर्न चाहन्छौ । हामी आफ्नो अधिकार रक्षाका लागि संविधानसभाभित्र र बाहिर सडकमा पनि लड्न तयार छौ भन्ने सन्देश सत्तामा बसेको कांग्रेस र एमालेलाई दिएको छ ।” भन्नुभयो
अध्यक्ष गच्छदारले संविधानसभाको मुद्दा प्रचण्डले जनयुद्ध शुरु गरेपछि मात्रै सम्भब भएको हो । यो संविधानसभाका लागि हजारौले रगत बगाएका छन् । संघीयता, समानुपातिक, समावेशी र पहिचानको लागि सबै समुदायको अधिकार सुनिश्चित गर्न प्रचण्डको नेतृत्वमा भएको युद्धकै कारण हो भन्नुभयो ।
संविधान लेखनका सवालमा यतिबेला न सहमतिको प्रयास थालिएको र न प्रक्रिया नै चलिरहेका बेला ३० दलीय मोर्चाले आफ्नो शक्ति भने देखाएको छ । त्यसैले विपक्षी नेताहरूमा सत्तापक्षलाई गलाउने गरी दवाव दिन सफल भएका छन् । उनीहरूको अडानमा जनसमर्थन रहेको पनि देखिएको छ । त्इसैले अध्यक्ष गच्छदारले सहमति विनाको संविधान चल्दैन र जनताले मान्दैन भन्दै आफूले सहमतिबाट संविधान बनाउन भनि सरकार र ठूला दललाई पटक पटक भनेको जानकारी दिनुभयो ।
कांग्रेस–एमाले ‘कलर ब्लाइण्ड’ - भट्टराई
आमसभालाई सम्बोधन गर्दै एमाओवादी नेता डा. बाबुराम भट्टराईले नेपाल विभिन्न जातजातिको रंग मिलेर बनेको र कांग्रेस–एमालेका केही नेताहरूलाई ‘कलर ब्लाइण्ड’ (रंग नदेख्ने) रोग लागेको टिप्पणी गर्दै यही रोगका कारण इन्द्रेणीजस्तो रंगीन नेपालमा कांग्रेस एमालेले एउटामात्रै रंग देखिरहेको भन्दै शनिबारको सभा ट्रेलरमात्रै भएको र अझै पनि सत्तापक्षले आँखा नखोले साँच्चैको फिल्म देखाइदिने बताउनुभयो ।
“एमाओवादी नेताको टाउकाको मोल तोक्नेहरूले संविधान अपरहरण गरेकाले आन्दोलन गर्नुपरेको बताउनुहुँदै डा। भट्टराईले रजानीतिक क्रान्ति पुरा नभएकाले आर्थिक क्रान्तिमा लाग्नुपूर्व राजनीतिक क्रान्ति गर्नुपर्ने” पनि बताउनुभयो । उहाँले सहमतिबाट संविधान बन्छ भन्ने आफूहरू वार्तामा आउन तयार रहेको भन्दै अधिकार प्राप्त नभएसम्म क्रान्तिकारीहरू नझुक्ने स्पष्ट गर्दै ‘बाघ बूढो भए पनि घाँस नखाने पनि स्पष्ट पार्नुभयो ।
काठमाडौं कब्जा हुनसक्छ- यादव
आमसभालाई सम्बोधन गर्ने क्रममा मधेसी जनअधिकार फोरम नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले विद्रोहबाट काठमाडौं कब्जा गर्ने र नयाँ संविधान बनाउने चेतावनी दिनुभएको छ । सरकारी पक्षको अनुमानभन्दा बढी र आन्दोलनकारीले भनेजति जनसहभागिता नभए पनि भरिभराउ खुलामञ्च देखेर नेताहरूको हौसला भने बढेको थियो । त्यस्तैमा अध्यक्ष यादवले जनता विद्रोहका लागि तयार रहेको भन्दै आन्दोलनकारी मोर्चाका नेताहरूलाई खुट्टा नकमाउन आग्रह गर्नुभएको छ ।
वार्ताबाट मधेस प्रदेश बन्छ, लिम्बुवान बन्छ, नेवा प्रदेश बन्छ भने वार्ता गर्नुस्, नत्र मधेसमा विद्रोह हुन्छ र विद्रोहीले काठमाडौं कब्जा गरेर नयाँ संविधान बनाउने बताउनुभयो ।
त्यस्तै सदभावना पार्टीका अध्यक्ष राजेन्द्र महतोले वार्ता गर्ने भए एक दुई दिनभित्रै गरिहाल्न प्रचण्डलाई आग्रह गर्नुभएको छ । महतोले आन्दोलन सुरु भइसकेपछि वार्ता नहुने र आन्दोलन पनि नरोकिने बताउँदै प्रचण्डलाई सम्बोधन गर्दै एक दुई दिनमै वार्ता गरिहाल्न आग्रह गर्नुभयो । त्यस क्रममा उहाँले कांग्रेस र एमालेले ०४७ सालको संविधानलाई बाइबल र पुराणजस्तो ठानेको भन्दै कांग्रेस एमालेलेलाई संविधान नचाहिएको आरोप लगाउनुभयो ।
संघीय समाजवादी पार्टी नेपालका अध्यक्ष अशोक राईले भने कांग्रेस–एमालेले संविधानसभालाई ब्यारेक बनाएको आरोप लगाउनुभएको छ । सभालाई सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष राईले कांग्रेस एमालेको उल्टै गति उल्टै मतिले देश र जनताले दुःख पाएको जिकिर गर्दै उल्टो बुद्धि भएका कांग्रेस एमालेले संविधानसभालाई ब्यारेक र जेल बनाउने काम गरेको टिप्पणी गर्नुभयो ।
संविधानसभालाई प्रतिगमनको औजार बन्नबाट रोक्नका लागि आफूहरू आन्दोलनमा उत्रेको बताउनुभएका राईले १० प्रदेशको संविधान बनाएमात्रै शिल्पी समुदाय, मुसलमान, सीमान्तकृत र आदिवासीको अधिकार सुरक्षित हुने दावी गर्नुभयो ।
तराई मधेस लोकतान्त्रिक पार्टीका वरिष्ठ उपाध्यक्ष हृदयश त्रिपाठीले जनसहभागिताबाट उत्साहित हुँदै ३० दलीय मोर्चाको जनसभामा सहभागीहरू नेपाली नागरिक नै भएकोले विहारबाट आएको भनेर भ्रममा नपर्न कांग्रेस, एमालेलाई सुझाव दिनुभयो । त्रिपाठीले भन्नुभयो “एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले टेलिभिजन हेरिराख्नु भएको होला । यहाँका जनसमुदाय यूपी विहारबाट आएका होइनन् । न त कुमाउ र गढवालबाट आएका हुन् ।”
कांग्रेस सभापति सुशील कोइराला र एमाले अध्यक्ष केपी ओली २०६२।६३ को जनआन्दोलन र परिवर्तन विरोधी भएकोले हाल देखाएको चरित्रबाट आश्चर्य मान्न नपर्ने पनि
त्रिपाठीले बताउनुभयो । उहाँले अहिले कांग्रेस, एमाले सहमतिमा आउन नचाहे पनि पछि सहमतिमा आउन बाध्य हुने बताउँदै कांग्रेस एमालेलाई दुई तिहाईको दम्भ नदेखाउन उनले चेतावनी दिनुभयो ।
राष्ट्रिय मधेस समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष शरदसिंह भण्डारीले कांग्रेस–एमालेलाई तीनवटा मुद्दा लगाउनुपर्ने माग गर्नुभयो । भण्डारीका अनुसार राज्यविरुद्धको अपराध, ठगी र अपहरणको मुद्दा लगाउनुपर्ने भन्दै कांग्रेस–एमालेको कारण देश विखण्डन तर्फ जान लागेकोले यसको जिम्मेवार पनि उनीहरू नै हुनुपर्ने बताउनुभयो ।
भण्डारीले संसदमा दुई तिहाई बहुमतको नाममा संविधानसभालाई अपहरण गरेको आरोप लगाउँदै सहमतिको बाधक पनि कांग्रेस एमाले नै भएको दाबी गर्दै सहमतिको वाधक नबन्न आग्रह गर्नुभयो । अहिलेकै जसरी सत्तापक्ष अडिग रहेमा देश विखण्डनमा गएमा त्यसको जिम्मा कांग्रेस–एमालेले लिनुपर्ने पनि उहाँले बताउनुभयो ।
त्यस्तै तराई मधेस सदभावना पार्टी अध्यक्ष महेन्द्रराय यादवले शान्ति प्रक्रिया, मधेस आन्दोलन, आदिवासी, जनजाति, मुस्लिम लगायतसँग गरिएको सम्झौता कार्यान्वयनका लागि आन्दोलन उत्रिनु परेको बताउनुभयो ।
आमसभालाई सम्बोधन गर्दै आदिवासी जनजाति आन्दोलनका प्रवक्ता डा ओम गुरुङले भने अधिकार प्राप्तिका लागि आवश्यक परे बन्दुक उठाउने चेतावनी दिनुभयो ।
“आदिवासी जनजातिहरू बन्दुकसँगै जन्मेका हुन्, बन्दुकसँगै हुर्केका हुन्, आवश्यक पर्याे भने बन्दुक उठ्छन् भन्दै आदिवासी जनजाति युवाहरूको दस्ता बनिसकेको” जानकारी पनि दिनुभयो । गुरुङले आदिवासी जनजातिको अधिकार माग्दा देश टुक्राउन खोजेको आरोप लगाइएको भन्दै ३० दलीय मोर्चाको आन्दोलनमा ऐक्यवद्धता जनाउनुभएको थियो ।
शब्दमा आमसभाका झाँकी र आकर्षण
एनेकपा—माओवादीसहितको तीस दलीय मोर्चाले शनिबार राजधानीमा आयोजना गरेको बृहत् आमसभा अपराह्न २ः२० मा औपचारिकरूपमा सुरु भएर ५ः४५ मा समाप्त भएको थियो । प्रदर्शनपूर्व लाठीसहितको जुलुश निकाल्ने तयारीले हिंसा मच्चिने भय जनाइएको भए पनि त्यस्तो भएन । वानेश्वरमा निषेधित क्षेत्रमा भने झडप भयो । राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले गरेको अनुगमनमा पनि प्रदर्शन शान्तिपूर्ण रहेको बतायो ।
नेपालको राष्ट्रिय गानबाट औपचारिक प्रारम्भ गरिएको बृहत् आमसभामा तीस दलीय मोर्चाका विभिन्न झाँकीहरू प्रस्तुत थिए । एकीकृत नेकपा माओवादीका अध्यक्ष तथा बृहत् आमसभाका समेत अध्यक्ष रहनुभएका पुष्पकमल लाई बृहत् आमसभातर्फ लैजान पार्टीका कार्यकर्ता तथा सुरक्षा निकायले विशेष सुरक्षा व्यवस्था मिलाएको थियो ।
राजधानीको खुलामञ्चमा सुरुभएको आमसभामा अधिकांश सहभागी ग्रामीण अनुहारका देखिन्थे । टुँडिखेल मैदान भने हिलाम्य थियो । तीस दलीय मोर्चाका कार्यकर्ता हिलाम्य टुँडिखेलमा आफ्ना नेताले के भन्छन् भन्ने सुन्न लालायित देखिन्थे ।
तीस दलीय मोर्चाका स्वयमसेवकहरू कार्यक्रमलाई मर्यादित र सभ्य बनाउन दिलोज्यानपूर्वक सहयोग गरिरहेका थिए ।
आदिवासी जनजातिका अगुवा पासाङ शेर्पाले उद्घोषणका प्रारम्भमा नै फोटो पत्रकारलाई मञ्च अगाडिबाटै तस्बिर खिच्न र मोर्चाका कार्यकर्तालाई आ–आफ्नो पार्टीको झन्डा फहराइदिन आग्रह गरेका थिए ।
मैदानको अग्रभागमा पत्रकार र पत्रकारका पछाडि तीस दलका कार्यकर्ता, त्यसपछि हजारांँैको सङ्ख्यामा जनसमूह टुँडिखेलमा उपस्थित थिए । टुँडिखेल हिलाम्य भएकाले सर्वसाधारण बागबजार अगाडि रहेको आकासे पुल, रत्नपार्क र नजिकै रहेको बसपार्कसम्म छरिएर रहेका थिए ।
आयोजित कार्यक्रमलाई आकर्षक बनाउन विभिन्न पहिचान झल्कने झाँकी तथा विभिन्न बोलमा नृत्यहरू प्रदर्शनसमेत गरिएको थियो । दलका अग्रज नेताहरूका अगाडि लाखे, छ्याटु, होली, सोरङ्गे, साकेलालगायतका नृत्य तथा झाँकीहरूको प्रदर्शनले कार्यक्रमलाई थप आकर्षक बनाएको थियो ।
लाखे (नेवारी), छ्याटु, (गुरुङ), होली (मधेसी), सोरङ्गे (मगर) र साकेला (किराँत) जातिका विभिन्न कार्यक्रममा देखाइने नृत्यहरू हुन् ।
टुँडिखेल मैदानमा योङ कम्युनिस्ट लिग (वाइसिएल) लेखिएका राता टोपी र लाठी बोकेका युवा दस्ताको उपस्थिति थियो । सहमतिमा संविधान जारी गर्न दबाब दिने उद्देश्यले सो बृहत् आमसभा सुरु गरिएको हो ।
एमाओवादीका उपाध्यक्ष नारायणकाजी श्रेष्ठले नेतृत्व गर्नुभएको जुलुस र सुरक्षाकर्मीबीच नयाँ बानेश्वरमा भएको झडपमा परी घाइते भएका पाँच कार्यकर्ता मञ्चमा प्रवेश गरी पत्रकारलाई फोटो खिचाउन लागि परेका थिए ।
सभास्थलमा एमाओवादीका नेता गिरिराजमणि पोखरेलले लेख्नुभएको ‘पहिचानमा आधारित सङ्घीयता किन’ नामक पुस्तक एमाओवादीका अध्यक्ष प्रचण्डले विमोचन गर्नुभएको थियो ।